ကျီးပေါင်းအတွက် အကောင်းဆုံး မိဿလင်ကြပ်ထုပ် ပြုလုပ်ပုံအဆင့်ဆင့် …. – Sharing
ကျီးပေါင်းအတွက် အကောင်းဆုံး မိဿလင်ကြပ်ထုပ် ပြုလုပ်ပုံအဆင့်ဆင့် ….
Dr Mrs Mg | February 27, 2020 | ကျန်းမာရေး | No Comments
ကျီးပေါင်းအတွက်အကောင်းဆုံးမိဿလင်ကြပ်ထုပ် ပြုလုပ်ပုံအဆင့်ဆင့် ….
ပိတ်စအဖြူ…ချည်ထည်အကြမ်း အဖြူရောင်တစ်ကိုက်ဝယ်ပာ(ကြပ်ထုပ်၃ထုပ်စာရသည်)မိဿ လင်အမှုန့်..အကြမ်းပန်းကန်တစ်လုံးစာကို..ပိတ်စနှစ်ထပ်ဖြင့်ထုပ်ရမည်။အတွင်းခံပိတ်စ..(၁၁)လက်မပတ်လည်။အပြင်ခံပိတ်စ(၁၄)လက်မပတ်လည်ထုပ်ရပာမည်။
အထုပ်နှစ်ထုပ်ပြုလုပ်ပြီးတစ်လှည့်စီ နာရီဝက်ခန့်ထိုးပါ။ မုံညှင်းဆီ၊နှမ်းဆီအရင်လိမ်းပြီးမှထိုးလျှင်ပို၍ချောမွေ့ပါသည်။ ဆေးခန်းသွား၍ငွေကုန်ခံမည့်အစားမိမိအိမ်တွင်သက်သာမည့်နည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်။
ဇက်ကျီးပေါင်း။ခါးဆစ်ကျီးပေါင်းကို မိဿလင်ကြပ်ထုပ်ထိုးပြီးလျှင် သင်္ဘောရွက်ကိုပျော့အောင်ရေနွေးခဏစိမ်ပြီးကပ်ပေးပါ။ ကျီးပေါင်းတဖြည်းဖြည်းပါ:သွားပါလိမ့်မည်။ဆေးပူတွေအမြဲမလိမ်းပါနှင့်။ပရုပ်ဆီမလိမ်းပါနှင့်။ပူလျှင်ယားလျှင်သနပ်ခါးမြစ်နှင့်ဆားသွေးလိမ်းပါ။
ကြီးပေါငျးအတှကျအကောငျးဆုံးမိဿလငျကွပျထုပျ ပွုလုပျပုံအဆငျ့ဆငျ့ ….
ပိတျစအဖွူ…ခညျြထညျအကွမျး အဖွူရောငျတဈကိုကျဝယျပာ(ကွပျထုပျ၃ထုပျစာရသညျ)မိဿ လငျအမှုနျ့..အကွမျးပနျးကနျတဈလုံးစာကို..ပိတျစနှဈထပျဖွငျ့ထုပျရမညျ။အတှငျးခံပိတျစ..(၁၁)လကျမပတျလညျ။အပွငျခံပိတျစ(၁၄)လကျမပတျလညျထုပျရပာမညျ။
အထုပျနှဈထုပျပွုလုပျပွီးတဈလှညျ့စီ နာရီဝကျခနျ့ထိုးပါ။ မုံညှငျးဆီ၊နှမျးဆီအရငျလိမျးပွီးမှထိုးလြှငျပို၍ခြောမှပေ့ါသညျ။ ဆေးခနျးသှား၍ငှကေုနျခံမညျ့အစားမိမိအိမျတှငျသကျသာမညျ့နညျးလမျးဖွဈပါသညျ။
ဇကျကြီးပေါငျး။ခါးဆဈကြီးပေါငျးကို မိဿလငျကွပျထုပျထိုးပွီးလြှငျ သင်ျဘောရှကျကိုပြော့အောငျရနှေေးခဏစိမျပွီးကပျပေးပါ။ ကြီးပေါငျးတဖွညျးဖွညျးပါ:သှားပါလိမျ့မညျ။ဆေးပူတှအေမွဲမလိမျးပါနှငျ့။ပရုပျဆီမလိမျးပါနှငျ့။ပူလြှငျယားလြှငျသနပျခါးမွဈနှငျ့ဆားသှေးလိမျးပါ။
ညအိပ်ရာဝင်ခါနီးတိုင်း ပျားရည်တစ်ဇွန်းစားပေးခြင်းဖြင့် ရနိုင်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူး
ဇက်ကြောတက် လက်ပြင်ငုတ် အုံးလွဲနေသူများ အတွက် နာရီပိုင်းအတွင်း ပျောက်တဲ့ နည်းလေးပါ
အရိုးပွရောဂါနှင့် လေဖြတ်ခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်သော ငါးလေးအိုးကပ်